Ezuru ihe dị ka $ 50.000 n'aka iTunes | Esi m mac
Ihe dị ka $ 50.000 zuru n'aka otu afọ 90 jiri iTunes
Eziokwu bụ na ọ dị nwute na taa ndị mmadụ enweghị nsogbu ọ bụla na akụkọ banyere aghụghọ na izu ohi nke ndị agadi na-adịgide adịgide. Na nke a ọ bụ otu nwoke dị afọ iri itoolu nke onye ohi rafuru, jiri iTunes, ghọgburu ya $ 90.
Achọpụtara akụkọ a site na mkpesa nke nwa nwa nke onye aghụghọ a mere na ọ bụ na ọ ghọtara na onye na-ezu ohi nna nna ya na-eme ka ọ bụ ya. Ezigbo ihere na ndị mmadụ na-eji onye agadi eme ihe iji zuo ego n'ụzọ dị otú a.
Onye eboro aghụghọ a emeela agadi, ya mere ọ ghọtaghị ihe na-eme. O yiri ka ọ natara oku site n'aka onye na-eme ka nwa nwa ya (onye mechara kọwaa ikpe ahụ) na-arịọ nna nna ya ego idozi nsogbu m na-enwe.
Onye aghụghọ ahụ gwara agadi nwoke ahụ na ha nwere nnukwu ihe mberede okporo ụzọ durante unas vacaciones en Florida na nke ahụ Achọrọ m ego iji kwụọ ụgwọ nke ihe mere. Ka ụbọchị na-aga ma hụ na onye a kwetara inye ego maka ndị ọka iwu, ụlọ ọgwụ na ụgha ndị ọzọ, ọ gara n'ihu ịrịọ ego ruo mgbe ọ ruru ihe ruru $ 50.000. Ofzọ nke iduhie nna nna ahụ bụ n'ụzọ bụ isi site na ịersonomi, na-eji ohere ịzụta kaadị na iTunes. Además llegó a conseguir el número de cuenta del anciano.
Nwa nwa, nke m chere na site na akụkọ ahụ, agaghị eleta nna nna ya nke ukwuu, ọ ghọtara nke a wee gwa ndị isi na-aga n'ihu nyocha iji jide onye aghụghọ a. Ọ ga-esi ike iweghachite ego ahụ ezuru mana ha nwere olile anya na site na igbasa ozi ọma na mmadụ agaghị adaba n'ụdị aghụghọ a. Enyerela onwe gị iTunes igodo onye ọ bụla ma ọ dịkarịrị obere nzi ozi ma ọ bụ n’ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe dị ka $ 50.000 zuru n'aka otu afọ 90 jiri iTunes
3D mgbaghoju anya ZeGame ugbu a na Steam na ngosi na ego
Etu esi gbanyụọ autoplay na YouTube